Naoty Mena: Fomba Fiarovantenan’ny Mpanao Gazety Ao Honduras Rehefa Mitati-Baovao Manaitaitra · Global Voices teny Malagasy
Naoty Mena: Fomba Fiarovantenan'ny Mpanao Gazety Ao Honduras Rehefa Mitati-Baovao Manaitaitra
Nandika (en) i Fundacion MEPI
Voadika ny 10 Janoary 2014 3:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español
Lehilahy mipetraka eo amin'ny zaridaina iray any Tegucigalpa, Honduras, mamaky gazety ahitana lohateny manao hoe “Lehilahy mitam-piadiana namono ny vadin'ny sekreteran'ny Filoha”. 9 Jona 2007. Saripikan'i Gabriel Vallecillo ao amin'ny Flickr, ambany lisansa Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Ana Arana sy iDaniela Guazo ho an'ny Fundación MEPI. Hamoaka ny lahatsoratra manontolo ao anatin'ny andian-dahatsoratra telo izahay. Ity no lahatsoratra voalohany amin'izany.
San Pedro Sula: Colon dia zaratanin'ny fambolena sy ny fiompiana omby any amin'ny morontsirak'i Honduras mifanolotra amin'i Karaiba. Manavatsava tendrombohitra, renirano ary zavamaniry matevina mihoatra ny 8000 km² ny Jeografiany. Toerana stratejika sy toeram-pampitana rongony avy any Amerika Atsimo mankany Meksika sy Etazonia. Lohalaharana amin'izany bemidina izany ny mpanondrana Meksikana sy Kolombiana, araka ny tatitra nataon'ny polisy kolombiana sy Hondioràna. Ny fambolena voanio afrikana no entina manafina toeram-piantsonana fiaramanidina miafina, izany efa nampiasain'ny voromby mpandraraka fanafody mamono bibikely ary amin'izao fotoana dia ampiasain'ny voromby kely mitondra rongony cocaïne iantsonana tsy misy fanakatsakanana, araka ny filazan'ny Tafika Hondioràna.
Ny mpitondra ao an-toerana amin'izao fotoana izao dia ny mpirahalahy Javier sy Leonel Rivera Maradiaga, mpangalatr'omby teo aloha ary manambola amanapitrisany dolara amin'izao fotoana izao. Ny fikambanan-jiolahin-dry zareo izay antsoina hoe Los Cachiros, no mifantina ny kandidà politika sy manao fifanarahana amin'ny mpitondra monisipaly sy amin'ny polisy ao an-toerana, hoy ny filazan'ny departemantan'ny fitantanam-bola ao Etazonia misahana ny Fanaraha-maso ny Fidiran'ny Vahiny, OFAC.
Vao talohaloha teo dia vitsy ihany ny Hondioràna no mahafantatra ny momba ny Los Cachiros. Tsy mahasahy manoratra mopmba ny zavatra ataony ny mpanao gazety. Raha ny marina, vitsy ny mpanangom-baovao no efa nitsidika an'i Colon, ny zaratanin'izy ireo, na zaratany hafa any avaratra ao amin'ity firenena Amerikana Tafovoany ity, izay ampolony ny lehiben'ny mpanondrana rongony no mampiroborobo ny tambajotran-drongoniny tsy dia misy fanarahamason'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana.
Tamin'ny volana jona tamin'ny taondasa teo vao namaky tamin'ny gazety tao an-toerana momba ireo mpirahalahy Maradiaga sy ny fikambanany ny Hondioràna. Zavatra mitovitovy amin'izany ihany koa no mitranga amin'i José Handal Pérez, mpandraharaha malaza ao San Pedro Sula, tompon'ny ampiran'ny fivarotana antsinjarany, izay ahitana fivarotana akanjo, kojakojam-piara ary efitra fisakafoanana. Tamin'ny volana avrily ny gazety tao an-toerana no nanoratra momba an'i Handal Pérez, taorian'ny tatitra hafa navoakan'ny OFAC, izay nametraka azy ho mpitatitra rongony sy mpanadio vola.
“Namoaka ny tantara izahay satria i Etazonia no nanome ny vaovao taminay,” hoy ny fanazavana tsy misy fisalasalana nataon'ny tonian'ny gazety iray nangataka ny tsy hotononina anarana ao amin'ity lahatsoratra ity. “Sarotra dia sarotra ny hanao famotorana amin'ny zavatra toy izany ato amin'ity firenena ity. Tsy afa-maka risika izahay. Tsy misy manampahefana ao an-toerana ihany koa hanome porofo anay tahaka izany.”
Lasa toerana idealy hanaovana trafikan-drongony iraisampirenena i Honduras. Difotry ny kolikoly ny andrim-panjakana ao amin'ny firenena ary tsy mahomby na tsy azo itokisana ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana, araka ny tatitra nataon'ny Biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny Rongony sy ny Heloka Bevava nivoaka tamin'ny Septambra 2012 (UNODC), “Fikambanan-jiolahy Iraisampirenena ao Amerika Afovoany sy Karaiba.” Tao anatin'ny efa-taona farany izay nanonganana ny filoha Manuel Zelaya sy nametrahana ny Filoha Porfirio Lobo, dia nisy krizin'andrimpanjakana nandevona ity firenena ity, izay niteraka fahabangam-pahefana izay nohararaotin'ny fikambanan-jiolahy iraisampirenena sy ao an-toerana, araka ny tatitra nataon'ny UNODC. Amin'izao fotoana izao i Honduras no manana ny taha ambony indrindra amin'ny famonoan'olona manerana izao tontolo izao ahitana trangam-pamonoana olona 91 amin'ny mponina 100 000. Avo kokoa ny taha any amin'ny faritra avaratra, izay iasan'ny tambajotram-panondranana rongony. Ity firenena ity ihany koa no manana ny taha ambony indrindra amin'ny famonoana, fanafihana mpanao gazety amin'ny firenena tsy misy ady.
Efa niasa maharitraritra tany Honduras ihany koa ny vondrona Meksikana—Zetas, Sinaloa y Gulf—. Mivezivezy amin'ny moron'ity firenena ihany ihany koa ny fikamban-jiolahy Kolombiana roa, Ny Rastrojos, izay mifandray akaiky amin'ny Los Cachiros, sy ny Urabeños. Ao ihany koa ny Maras na andian-jiolahimboto tanora—MS13 sy Mara 18, izay nanomboka tamin'ny taompolo 90 tamin'ny alalan'ny fanondranana ireo andian-jiolahimboto nihalehibe tany amin'ny barrios mahantran'i California — ary mifehy ny barrios any amin'ny sasantsasany amin'ireo tanandehibe malazan'ny firenena. Any La Ceiba, tanàndehibe iray ao Karaiba izay malaza ho kianja lehiben'ny fanondranana rongony, fa miezaka mafy ny hamerina ny mpizahatany ho any ny fiarahamonina sivily ao, dia miroborobo ny andian-jiolahimboto ary ry zareo aza no mamaritra izay afa-monina [afa-miditra sy mivoaka] any amin'ny faritra fehezin-dry zareo. Ireo andian-jiolahimboto manerana ny firenena ireo no manao ny asan'ny mpaninjara rongony sy antsoin'ny vondrona tsindraindray ho miaramila mpandeha an-tongotra na mamita iraka (ratsy), araka ny filazan'ny polisy Hondiorana sy ny UNODC.
Na izany aza, rehefa vakiana ny ankamaroan'ny gazety ao Honduras, dia tsy mahazo tsara izay tena mitranga ao amin'ny firenena ny mpamaky. Soratana tsy misy filazalazana ny toe-draharaha na fanazavazavana ny tantaram-pamonoan'olona feno ra mandriaka, sary mankandoa. Amin'ny lahatsoratra manaraka isika no hijery ny fomba fitateran'ny fampitam-baovao ao Honduras ny famonoana olona.
22 ora izayKiobà